4 Istaraatijiyad oo loogu talagalay in loogu beddelo booqdayaasha cusub kuwa soo noqonaya | Martech Zone
4 Istaraatijiyad oo loogu talagalay in loogu beddelo booqdayaasha cusub kuwa soo noqonaya
Jimco, Diisambar 18, 2015 Isniin, Janaayo 4, 2021 Douglas Karr
Waxaan dhibaato weyn ku qabnaa warshadaha ka kooban waxyaabaha ku jira. Ficil ahaan kheyraad kasta oo aan ka aqriyo suuqgeynta waxyaabaha ku saabsan waxay la xiriiraan helitaanka martida cusub, gaareysa cusub bartilmaameedsada dhagaystayaasha, iyo maalgashiga Emery kanaalada warbaahinta. Kuwani dhammaantood waa xeelado helitaan.
Helitaanka macaamiisha ayaa ah tan ugu tartiib-tartiib badan, ugu adag, uguna qaalisan ee kordhinta dakhliga iyadoon loo eegin wax warshadeed ama nooc badeecad ah. Maxay xaqiiqadan ugu lumisay xeeladaha suuqgeynta waxyaabaha ku jira?
Waa ku dhowaad 50% way ka sahlan tahay in laga iibiyo macaamiisha hadda jira marka loo fiiriyo rajooyinka cusub sida ku cad Qiyaasta Suuqgeynta
5% koror ah sii-haynta macaamiisha waxay kordhin kartaa macaashka 75% sida laga soo xigtay Bain iyo Shirkad.
80% dakhliga mustaqbalka shirkadaada wuxuu ka imaan doonaa kaliya 20% macaamiishaada hada jira sida ku cad Gartner.
Haddii ganacsigaagu waqti iyo tamar ugu bixiyo istiraatiijiyadda sii haynta macaamiisha, oo aad garawsato in istiraatiijiyad suuqgeynta ay ka kooban tahay macmiil cusub, macno ma samaynayso - safarka macmiilkaaga - ka caawinta martidaada cusub inay u beddelaan soo-booqdayaasha soo noqnoqonaya labadaba kharash wax ku ool ah oo si weyn u kordhin doonaa dakhliga? Waa caqli caadi ah.
Martech Zone ayaa sii wadaya kobaca laba-godka sanadba sanadka ka dambeeya iyada oo aan lacag lagu isticmaalin iibsashada martida cusub. Dabcan, waxaan u tiirineynaa waxbadan oo koritaankan ah horumarka joogtada ah ee khibrada isticmaale iyo tayada nuxurka - laakiin qaar kamid ah istiraatiijiyadaha aan geynayno ayaa aad uga hooseeya uguna fudud in la hirgaliyo:
Email kuugu soo dir - Ku dhiirrigeli joornaalkaaga booqdayaasha markii ugu horreysay soo baxa ama ujeedka bixitaanka qalab. Xiriirinta faa'iidooyinka joornaalkaaga ka dibna aad siiso nooc dhiirrigelin ah dadka soo booqda waxay wadi kartaa dhowr e-mayl… taasoo u noqon karta macaamiil muddo dheer ..
Ogeysiiska Browser - Badi daalacashada ayaa hadda isku dhafay ogeysiisyada desktop ee nidaamyada hawlgalka ee labada Mac ama PC. Waanu geynay Xalka ogeysiinta riixitaanka OneSignal. Markaad timaaddo bartayada adoo adeegsanaya mobilada ama desktop-ka, waxaa lagu weydiinayaa inaad rabto iyo inkale inaad u oggolaato ogeysiisyada desktop. Hadaad u ogolaato iyaga, markasta oo aan daabacno waxaa laguu soo dirayaa ogeysiis. Waxaan ku darsaneynaa daraasiin macaamiil maalinle ah boqolaal soo noqda usbuuc walba.
Diiwaangelinta Quudinta - hagaajinta iyo isku dhafka a Quudinta adeegga rukunka sii wadida bixinta. Dad aad u tiro badan ayaa rumeysan in quudinta ay dhimatay - haddana waxaan sii wadeynaa inaan aragno daraasiin ka mid ah macaamiisha quudinta cusub usbuuc kasta iyo kumanaan akhristayaal ah oo ku soo laabanaya bartayada.
Bulshada la socota - In kasta oo caannimada quudintu ay yaraatay, haddana bulshada ayaa kor u soo kacday. Ka dambeeya taraafikada mashiinka raadinta, taraafikada warbaahinta bulshada ayaa ah lamaanaha ugu sarreeya ee gudbinta boggeena. In kasta oo aysan suurtagal ahayn in la kala saaro taraafikadaas inta u dhexeysa qof kale soo socda ama kuweena, waxaan ognahay in markii aan kor u qaadnay raacdeena in taraafikada tixraaca ay isbarbar dhigeyso
Haysashada Akhriste kaliya maahan inay dadku soo noqdaan. Akhristayaasha sii wadaya soo noqoshada, akhri mawduucaaga, oo la falgala astaantaada waqti ka dib waxay kuu aqoonsan yihiin awoodda aad leedahay waxayna kordhisaa kalsoonida ay kugu qabaan. Aaminaadu waa lynchpin oo ku soo jiidata booqdaha macaamiil.
Warbixinnada Akhlaaqda ee Google Analytics, waxaad ka eegi kartaa New vs Returning warbixin. Markaad eegto warbixinta, hubi inaad wax ka beddesho taariikhda kala duwan oo aad eegto badhanka isbarbar dhiga si aad u ogaato in bartaadu ay sii haynayso akhristayaasha ama lumineyso in badan oo iyaga ka mid ah. Maskaxda ku hay, dabcan, in mugga dhabta ah hoos loo dhigayo maaddaama Google Analytics ay ku tiirsan tahay qalabka cookies ee gaarka u ah. Maaddaama booqdayaashaadu nadiifinayaan buskudka ama ay ka soo booqanayaan aalado kala duwan, si buuxda oo sax ah looma tirinayo.
Labadii sano ee la soo dhaafay, waxaan diiradda saarnay inta badan maalgashigayaga istiraatiijiyadda haynta. Ma shaqaysay? Xaqiiqdii! Booqashooyinka soo noqoshada waa ilaa 85.3% on Martech Zone. Maskaxda ku hay, kuwani ma ahan kuwo gaar ah dadka soo booqda - kuwani waa booqashooyin. Waxaan labanlaabnay tirada booqdayaasha soo noqda 1 toddobaad gudahood marka ugu horreysa ee ay booqdaan goobta. Marka - tirada booqdayaasha soo noqonaya ayaa kordhay, tirada booqashooyinka booqde kasta oo soo noqda, iyo waqtiga udhaxeeya booqashooyinka ayaa yaraaday. Taasi waa muhiim… dakhliguna wuu sii fiicnaanayaa.
Soo-booqde soo-laabashada waxay aad ugu dhowdahay inuu kuu diro shirkad aad caawin karto, ama adiga laftiisa ku shaqaalayn karaan. Haddii aadan dhag u dhigin tirada booqdayaasha ku soo noqonaya bartaada, waxaad luminaysaa miisaaniyad badan, tamar, iyo waqti.
Tags: warbixinnada akhlaaqdaogeysiisyada biraawsarkaistaraatiijiga suuqgeyntaemailrukuminta quudintaAnalytics googlegorodcusub iyo soo noqoshocusub vs soo noqoshowarsidahasoo noqoshada booqdahasoo celinta martidawarbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada soo socotaMacaamiishanguud
Waa maxay Omni-Channel? Sidee ayey Saameyn ugu yeelaneysaa Tafaariiqda xilligan Fasaxa ah?
MomentFeed: Xalalka Suuqgeynta Mobaylka ee Goobista ah ee Raadinta iyo Bulshada
20, 2015 at 3: 48 AM
Waxaad raadineysay hab aad ku hesho martida soo noqonaysa, laakiin waxay kuxirantahay barta ay umuuqato. Aadida tijaabinta ogeysiiska biraawsarka 🙂
Nov 9, 2016 at 10: 23 AM
Maqaal weyn. Waxaan u maleynayaa in mararka qaar dadku iska iloobaan booqashada degel, waa wax fiican in la helo nooc ka mid ah nidaamka ogeysiinta sida Wargeysyada ama ogeysiisyada biraawsarka. Dhab ahaantii warside wanaagsan oo duug ah oo email ah ayaa si aad ah noogu shaqeynaya (PressPad).
Kordhinta sii haynta isticmaaleyaasha ayaa runtii ahayd mid ka mid ah yoolalkayaga ugu weyn markii aan bilawnay PressPad News, badeecadeenna loogu talagalay dadka wax qora. Waxaan u abuureynaa barnaamijyo moobil ah oo iyaga loogu talagalay, oo ogeysiinaya isticmaaleyaasha qoraal kasta oo cusub oo la daabaco, iyaga oo cusbooneysiinaya isla markaana hubin doona inay xiriirin doonaan. Sideed u aragtaa xalka noocaas ah?